Ikhaya likaKiara-igumbi elipholileyo eMorrocan Villa - I-Airbnb
Ikhaya likaKiara-igumbi elipholileyo eMorrocan Villa
Igumbi lakho lokulala e indlu enendawo yokuphola sinombuki zindwendwe onguKiara
Ifakwe kwilali yeentyatyambo, esandula ukwakhiwa, iKhaya likaKiara yindawo efanelekileyo yokuphumla kunye nokubaleka kubomi obuphithizelayo besixeko. Ngoyilo lwangoku lwamkele ifanitshala ekumgangatho ophezulu kunye nezinto eziluncedo, kulandele isitayile saseScandinavia kunye nemithi eluhlaza macala onke. I-villa inegadi yerozi phezu kophahla, apho ilungele amaqela. I-villa yonke ayenzelwanga ukunika uluhlu olusemgangathweni lwenkonzo kuphela kodwa nokunika ubomi obutofotofo kuzo zonke iindwendwe eziza kuhlala nathi.
-Igumbi lokulala elahlukileyo elinegumbi lokuhlambela elifanelekileyo, ibhedi ephindwe kabini 1.6mx2m. Ngamnye uneseti yetafile kunye nezitulo kwi-balcony yokuphumla, itafile yokusebenza, i-smart TV, i-Wifi ekhawulezayo.
-Ikhitshi: Ikhitshi lesiqithi, itafile yokutyela, ifriji, isitovu sokungeniswa, i-oveni yemicrowave, i-oveni, isitya sokuhlamba izitya, izixhobo zokupheka.
-Umgangatho wesithathu: Indawo yokuphumla apho unokonwabela ikomityi yeti okanye ikofu kwaye ufunde incwadi. Apha kulapho igadi yethu yerozi ikhoyo, sikwanayo ne-BBQ grill mat (kufuneka ubhukishe, iifizi ezongezelelweyo)
-Siyavuya ukukhokela iindwendwe zethu ngendlela yokukhetha kunye noku-odola izitya eziqhelekileyo ze-Hai Phong cuisine (zinokuhanjiswa ngqo kwikhaya likaKiara) ezinomgangatho ophezulu kwaye amaxabiso afanelekile. Kukwaluyolo kuthi ukukukhokela indlela yokuhamba esixekweni, ukuya eDo Son beach, Cat Ba Island, ezinye izinto ezinomtsalane eHai Phong.
- Sinendawo eyahlukileyo yezilwanyana zasekhaya
-Ikhitshi inezixhobo ezixhotyiswe ngokupheleleyo, iziqholo ezisisiseko zokupheka, ukuba ufuna ukuvula itheko, kufuneka ubhukishe nathi (imirhumo eyongezelelweyo)
- Iindlela ezahlukeneyo kwigumbi
- Indawo nganye inegumbi lokuhlambela
- Isifudumezi samanzi sombane
- Indawo yokupaka iimoto (ubukhulu: 2)
4.71 · Izimvo eziyi-51
Umbuki zindwendwe ngu- Kiara
UMam Kiara uyakuthanda ukuchitha ixesha nawe, akubonise kwaye akukhuthaze ngazo zonke izinto esizaziyo ngeHai Phong. Ukuba ufuna ukufunda indlela yokutya njengendawo yasekhaya, sineklasi yethu yokupheka ekufundisa izitya zokwenyani zaseVietnam ezingaphezulu kwezo ubuqhele ukuzifumana kwiLonely Planet kunye neTripAdvisor. Angathanda ukwabelana nani nonke.
UMam Kiara uyakuthanda ukuchitha ixesha nawe, akubonise kwaye akukhuthaze ngazo zonke izinto esizaziyo ngeHai Phong. Ukuba ufuna ukufunda indlela yokutya njengendawo yasekhaya, sin…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Đằng Hải